Qaar kamid ah Cuqaasha iyo Waxgaraadka Beesha reer Samatar, Sacad Muuse oo u Xushay Musharaxooda Golaha Deegaanka Hargeysa Inuu Noqdo Musharax Khaalid Cabdilahi Fallaago...
Monday February 22, 2021 - 00:57:12 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)- Qaar kamid ah Cuqaasha, Aqoonyahan, iyo Waxgaraadka Beesha Reer Samatar-Sacad Muuse, ayaa isku raacay Musharaxnimada Aqoonyahan Musharax Xildhibaan gole-deegaan Khaalid Cabdilahi Falaago, u taagan kamid noqoshada Xildhibaanada golaha Deegaanka degmada Hargeysa.
Cuqaasha iyo Waxgaraadka, ayaa sidoo kale, tilmaamay Musharax Xildhibaan Khaalid Cabdilahi Fallaago inuu yahay Musharaxa rasmiga ah ee Beeshaas u Metelaya golaha Deegaanka degmada Hargeysa, Isla markaana hiil iyo Hooba la garab joogaan.
Sidoo kale, Musharax Xildhibaan gole-deegaan Khaalid Cabdilahi Fallaago waxa si rasmiya usoo xushay Aqoonyahan iyo dhalinyarada Beesha reer Samatar Sacad Muuse, kuwasoo u gartay inuu noqdo Xildhibaan gole-deegaan Deegaanka degmada Hargeysa ee Deegaanada uu kasoo Jeedo Musharaxu.
Geesta kale, Musharaxnimada Khaalid Cabdilahi Fallaago waxa si rasmiya u Aqbalay Xisbiga Waddani oo markii uu ku qancay kartiisa iyo cudada Taageero ee u wato, u xushay inuu kamid noqdo Musharaxiinta golaha deegaanka Hargeysa ee Xisbiga Waddani.
Si kastaba ha haatee Musharax Xildhibaan gole-deegaan Khaalid Cabdilahi Fallaago, ayaa 30-kii sanno ee u dambeeyey noloshiisa ku noola Caasimada Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa, waana Musharax ka dheregsan baahiyaha aas-aasiga ah ee ay tabayso Caasimada Hargaysa, isla markaana waa Musharax aqoon-durugsan u leh, xilka u ordayo. Sidoo kale waa masuul la Dareen ah Bulshada uu meteli doono. fadlan Muwaadin codkaaga sii Musharax Xildhibaan Khaalid Cabdilahi Fallaago, oo u qalma inuu ku metelo.